Ziphazanyiswe yiCovid izinhlelo zikaNotoane olungiselela ama-Olympics - Impempe
Ziphazanyiswe yiCovid izinhlelo zikaNotoane olungiselela ama-Olympics
ULuke Fleurs noTeboho Mokoena abasekhempini ye-Under 23
Ukuvimbeleka kwabanye babadlali beqembu lesizwe labaneminyaka engaphansi kuka-23 sekuphazamise izinhlelo zomqeqeshi, uDavid Notoane ocija leli qembu.
UNotoane kumele ahlanganise ugesi weqembu azohlasela ngalo kwiTokyo Olympic Games eJapan ngoJulayi, kanti ukuya ekhempini okungezeka kube ngeyokugcina, bengaphelele abadlali afisa ukusebenza nabo kumphazamise kakhulu.
Abadlali abaphesheya abafana noLyle Foster abazange besakwazi ukufika ekhempini ngenxa yemithetho ehambisana nemizamo yokuvimbela ukubhebhetheka kweCovid-19 emazweni ehlukene emhlabeni.
“Besingathanda ukuba abadlali bethu abasemaqenjini aphesheya kwezilwandle sibe nabo ekhempini kodwa sanqindwa yimithetho yeCovid-19,” usho kanje uNotoane.
Imidlalo ye-Olyimpics ihlehlisiwe ngonyaka odlule ngenxa yokudlanga kweCovid-19, kanti nakulonyaka kusenokusabela ukuthi ingase igcine imisiwe uma lolu khuvethe lungehli.
Nokho AmaGlug-Glug, okuyigama elilalibizwa ngalo kudala leli qembu, asekhempini kumanje la uNotoane azama ukuhlanganisa khona iqembu eliqinile.
Unenselelo yokuqinisa ngabadlali abasha kwezinye izindawo kwazise abanye babadlali abenzoya nabo eTokyo abafana noThabo “Mayor of KwaMashu” Cele noTercious Malepe sebeqile eminyakeni engu-23.
Indlela asangahamba nabo uNotoane ukuthi babe yingxenye yabathathu abaneminyaka eyevile ku-23 iqembu ngalinye elivumelekile ukubasebenzisa kule midlalo.
“Inhloso yale khempu ukuhlanganisa abadlali abakuleli ukuze sibahlole, ikakhulukazi labo abasha eqenjini njengo-Ashley Du Preez weStellenbosch FC,” kusho uNotoane.
“Okunye esifuna ukukwenza wukulungisa indawo yasemuva maphakathi nenkundla (ebidlalwa nguMalepe phambilini) ukuqinisekisa ukuthi uma sekufika isikhathi sokuqoka iqembu esihamba nalo sibe sesilunge ngokugcwele,” kuchaza lo mqeqeshi.
Iqembu elisekhempini njengananje:
Onozinti: Sifiso Mlungwana (Golden Arrows FC); Mondli Mpoto (Bloemfontein Celtics), Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns FC)
Izitobha: Sandile Mthethwa (Chippa United FC), Katlego Mohamme (University of Pretoria FC), James Thabiso Monyane (Orlando Pirates FC, Reeve Frosler (Kaizer Chiefs), Sifiso Ngobeni (Bloemfontein Celtics FC), Malebogo Modise (Maritzburg United FC ), Given Msimango (TS Galaxy FC), Keanu Cupido (Cape Town City FC), Luke Fleurs (SuperSport United FC
Abasesiswini: Athenkosi Dladla (University of Pretoria FC), Goodman Mosele (Baroka FC), Kamohelo Abel Mahlatsi (Moroka Swallows FC), Teboho Mokoena (Supersport United FC), Nkosingiphile Ngcobo (Kaizer Chiefs FC), Happy Mashiane (Kaizer Chiefs FC), Grant Margeman (Mamelodi Sundowns FC), Kgaogelo Sekota (Moroka Swallows FC)
Abagadli: Fagrie Lakay (Cape Town City), Evidence Makgopa (Baroka FC), Ashley Du Preez (Stellenbosch FC), Keletso Makgalwa (Mamelodi Sundowns FC)
Previous Previous post: Ilindwe yimidlalo engase icacise ngesizini yayo iChiefs uma ibuya ekhefini
Next Next post: UTau uqine idolo ngokuzibekisela indawo kwi-Afcon